BOODADA BANI'AADAMKA EE MADAXA: SIDA LOO TIRTIRO IYO TALLAABOOYINKA KA HORTAGGA AH - GURI, GURI
Ka takhalusi iyaga! Boodada bani'aadamka ee madaxa: Sida loo tirtiro iyo tallaabooyinka ka hortagga ah
Waxaa soo baxday in boodada laga helay kaliya ma ahan xayawaanka. Waxaa jira bood bani'aadam ah. Markii hore, waxay ku nooshahay oo kaliya koonfurta America, waxaana hadda ku noolaa meel kasta oo qof.
Qaniinyada cayayaankaasi waxay dadka ku keenaan dhibaato badan. Ma joogaan jidhka bini-aadamka mar walba, sababtoo ah marka la barbardhigo jidhka xayawaanka, maaha wax cagaar ah cufan.
Laakiin, xaalad kastoo, haddii nin jidka agtiisa ah uu ku qulqulo gacmihiisa, waa inuu raadiyaa siyaabo uu ula dagaallamo dulinkan.
La dagaalanka boodada aadanaha
Cayayaanka waxay u dhaqmaan sidii sidayaal cudurro badan, oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda:
Hase yeeshee, cuduradan halista ah ee baaskiilku marar dhif ah ayuu ku dhacaa. Inta badan inta badan cayayaanka ayaa sabab u ah natiijada sida pulikoz. Tani waa calaamado muujinaya xasaasiyad xasaasiyadeed. Waxaa ka mid ah:
madax xanuun, hurdo la'aan iyo xanaaq;
finan badan oo ku yaal aagga qaniinyada;
heerkulka jirka sare;
caabuqa iyo uur qaadidda maqaarka;
muuqaalka boogaha ee cirridka iyo afka;
qanjidhada qanjidhada oo barara.
Dagaalka ka dhanka ah dulin-dhiigga nuugista ee bini-aadanka wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood. Tani waa tirtiridda saameynta qaniinyada iyo burburka cayayaanka naftooda. Lugaha badanaa waxyeello u geystey: cagaha, canqowga iyo lugta hoose. Laakiin badanaa way cararaan qaniinyada iyo madaxa. Caadi ahaan waxay ku dhuuntaan timaha qof iyo dharka dharka.
Marka qaniinyo la ogaado
Haddii qaniinyada hore u dhacdo, waxaad u dhaqmi kartaa si madaxbannaan, iyada oo aan lagu darin dhakhaatiirta xirfadda leh. Si arrintan loo sameeyo, waxaa haboon in la raaco qaabkan:
Boogta waxaa lagu daaweeyaa antiseptic, taas oo ah hydrogen peroxide, kareem khamriga: iodine, cagaar qurux badan, marka lagu daro, saabuunta lidka ku ah antiseptic, wakiil khaas ah antimicrobial, iwm.
Si looga fogaado bararka, daaweynta nabarka kadib Barafka waa in lagu daboolaa ama ku qaboojiyo qabow.
Natiijadu waxay ku xiran tahay cuncunka cuncunka.. Kuwani waa calamine ama soodhaha. Balaasyo khaas ah oo loo isticmaalo saameynta cayayaanka dhiigga qaada ayaa sidoo kale caawin kara.
Digniin! Haddii aad qabto finanosis iyo fal-celin xasaasiyad oo muujinaysa, waxaa lagula talinayaa in aad isla markiiba la tashatid takhtar kaasoo kuu qori doona daawooyinka qaniinyada qaniinyada. Waxaa ka mid ah, sida caadiga ah, daawooyinka antihistamine iyo daawooyinka saa'id ah ayaa ku qoran.
Kadib marxaladda dagaalka, boogaha soo-gaadhay ayaa dhammaaday, marxaladda labaad waxay bilaabmaysaa: ka saarida cayayaanka dhiig-jaqaan-ka qolka. Tani waa in la sameeyaa, haddii kale waxba kama dhumi doonaan, dhaawacyada jidhkoodu waxay si joogto ah u muuqan doonaan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro xaalado ku haboon oo loogu talogalay nolol raaxo leh
Si looga hortago in boodada laga yaabo inay saameeyso madaxa, dhaqaalaheeda fudud ayaa caawin doona. Xoojinta ka hortagga waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo saabuuntahaysashada saameyn cabsi.
Guryaha u baahan tahay si joogto ah u ilaaliyaan nadaafadda. Socdaalka, waxaa ugu wanaagsan in aad iska ilaaliso adiga oo leh buufin leh kuwa celiya.
Loo baahan yahay daaweynta cayayaanka ee xayawaanka guryaha. Tani waa in la sameeyaa maaddaama ay inta badan yihiin ilaha cudurka.
Markaad daaweyneyso guri dabaq ah waxay dareen gaar ah u leeyihiin degaannada xayawaanka. Gaar ahaan, qashin iyo meelaha ay ugu jecel yihiin. Haddii bisad ama eey kugula socdaan inta badan, kuraasta gaariga waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa sunta cayayaanka.
Daboolka roogga - Waa meel aad u fiican si aad u hesho cayayaanka. Waxay yihiin waxay ubaahantahay xitaa taxadar dheeri ah.
Nadiifi oo jeermiska nadiifiya. Sababo cad, waxay ka dhigi kartaa xeelad aad u wanaagsan oo cayayaanka.
Nadiifinta guud waxay ku lug leedahay nadiifinta iyo jeermiska. Meelaha lagu qadariyo guriga oo ah jawi wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta xubno qoyska ka mid ah.
Caawin! Shambo shucaac ah oo loogu talagalay aadanuhu ma jiraan. Shubooska insecticidal ee loogu talagalay xayawaanka, liddi ku ah, ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan, maadaama ay dulinku ku sii jiri karaan dhogorta xitaa ka dib marka la dhaqo.
Taxaddarradu waxay ka caawinaysaa qofka inuu ka ilaaliyo qaniinyada:
Ha ku neefsan xayawaanka guri la'aanta ah: badanaa waa kuwa sidey xanuunka.
Isu daridda dabeecadda, ugu fiican in lagu xidho jaakad ama jaakad oo leh gacmo dheer.
In kaynta iyo cawska duleedka ilaaliso buufin leh DETA ku filan - jilicsanaan xoog leh.
Booqo meelaha aan la kulmin heerarka nadaafadda inta badan..
Xitaa haddii qofku helay qaniinyada hal kalluun oo kaliya, ayuu kiis kasta u baahan yahay daaweyn hababka sare lagu sharaxay. Kahortaga wanaagsan ee muuqaalka boodada ee guriga ama guriga ayaa kaa caawin doona inaad iska ilaaliso saameynta xanuunka badan ee cayayaanka muddo dheer.